यी युवकसँग डेटिङमा छिन् सुष्मा कार्की, को हुन् त यी युवक ? – List Khabar
Home / मनोरंजन / यी युवकसँग डेटिङमा छिन् सुष्मा कार्की, को हुन् त यी युवक ?
admin 1 week ago मनोरंजन Leaveacomment 103 Views
नायिका सुष्मा कार्की रिलेसनसिप र कन्ट्रोभर्सी’ले चर्चामा हुन्छिन् । उनको नाम यसअघि फिल्म निर्देशक, कलाकार र गायकसँग जोडियो । यसअघि उनको रिलेसनसिप अनुप्रस्थ ब्यान्डका भोकलिस्ट निरन शाहीसँग थियो । निरनसँगको सम्बन्ध टुंगिएपछि सुष्मा सिंगल थिइन् । अहिले भने उनी सिंगलबाट मिंगल भएको खबर छ ।
पछिल्लो रिलेसनसिपबारे सुुष्मा स्वयमले सार्वजनिक गरेकी हुन् । यसैसाता इन्स्टाग्राममार्फत उनले प्रेमी र आफ्नो तस्बिर सेयर गर्दै आफू रिलेसनसिपमा रहेको खुलासा गरेकी छन् । सन् २०१७ का मिस्टर नेपाल अक्षयजंग रायमाझीसँगको रिलेसनसिपमा सुष्मा यतिबेला छिन् । उनी निकट स्रोतहले पनि सुष्मा र अक्षय केही समयदेखि डेटिङ गरिरहेको छन् ।
अक्षय र आफ्नो तस्बिरमा सुष्माको क्याप्सन छ : माया सँधै हामीसँगै रहिरहोस् । यो सबै कुराको उत्तर पनि हो ।’ सुष्माको उक्त पोस्टमा अक्षयले लभ-रियाक्ट पनि गरेका छन् । जे होस् उनी बिभिन्न कारण चर्चामा रहन्छिन् । यसपटक भने उनी डेटका कारण चर्चामा रहेकी छन् ।
Previous टिचिङ अस्पतालमा एकैपटक ६० भन्दा धरै डाक्टर र नर्समा संक्रमण
Next यी युवतीको टिकटकमा यस्तो हर्क’त, यतिबेला भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो)